Skrill - ihe ọzọ na Paypal - Geofumadas
Skrill - ihe ọzọ na Paypal
Nọvemba, 2018 Internet na Blogs
Ọganihu nke nkà na ụzụ emewo ka ụmụ mmadụ na-ekwurịta okwu site na ebe ọ bụla, na dịka nkà ha ma ọ bụ ọrụ ha nwere ike isi nye ụdị ọrụ ọ bụla n'elu ikpo okwu dị ka freelancer, Workana ma ọ bụ Ndozi, ndị na-akwado ndị ọzọ na usoro ịnweta na izipu ego site na ụzọ dị iche iche. Isiokwu a ga-akọwa otú abụọ n'ime ịkwụ ụgwọ na-eziga na ịnweta ọrụ nyiwe, jikọtara ibe weebụ. freelancer, inwe ike ịchọpụta uru na ọghọm ya.
PayPal, bụ otu n'ime ndị Refeyim ahụ maka usoro nhazi nke ịkwụ ụgwọ (iziga na ịnweta ego eletrik), a na-ejikarị ya na ụdị azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ akụrụngwa akụ na ụba, mgbasa ozi ya abawanyewokwa ekele maka ịba ụba nke freelancers N'ụwa nile, a nabatara ya dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile na ụlọ ọrụ.
Skrill wee pụta dị ka ihe ọzọ na Paypal na afọ 2001, nke a na-akpọ MoneyBookers, bụ ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ, interface ahụ zuru oke enyi na anaghị ekwe ka onye ọrụ ahụ funahụ na saịtị ahụ na-agbalị ịchọta ọrụ. Ọ bụrụ na anaghị eji PC arụ ọrụ ugboro ugboro ọ ga-ekwe omume ibudata ngwa ahụ na ekwentị mkpanaaka kpamkpam, ị ga-enwekwa ike ịnweta ọrụ niile dị na ibe weebụ.
Iji mee ihe atụ n'etiti ụzọ ịkwụ ụgwọ abụọ, anyị na-akọwa ọnọdụ, ebe a natara arịrịọ ọrụ maka ọrụ na mpaghara Geographic Information Systems, ọkachasị, imepụta ọtụtụ maapụ nwere ozi esichara site na onyogho satịlaịtị. na akụkọ nyocha maka ngwaahịa ọ bụla; Ndị ọrụ ngo ahụ na-enye maka ọrụ a ihe $ 2.000,00 USD, nke a ga-edebe na akaụntụ nke nyiwe ọrụ ejechi akwụkwọ ma gbochie maka ebumnuche nke nchebe ịkwụ ụgwọ, mgbe ị rụchara ọrụ ahụ nke ọma, a na-enyefe onye ọrụ ahụ ego ahụ, onye ga-enwe ọtụtụ nhọrọ ndọrọ ego, na n'ime ndị nwere ike iji bụ PayPal na Skrill.
N'iji tụnyere nyiwe dịka okwu ikpe
Na PayPal: Ịmepụta na otu akaụntụ dị mfe na free usoro, nsogbu-egosipụta onwe ya na ego, nke mere na akaụntụ kwupụtara ga-metụtara ndị a kaadị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị onye na, PayPal enye ókè nke ojiji nke akaụntụ na ichekwa iwepụ kwa ọnwa kwa afọ. Usoro a na - ewe 24 ka 48 awa. Ke adianade do, e nwere ihe mgbochi ndị ọzọ, naanị akwado 20 ụdị nke ego na dị ka ebe e kere akaụntụ, ụgwọ ịdị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-akpali si country're njem ị pụghị ịgbanwe adreesị gị, na-mara na e nwere ụfọdụ mgbochi na ọrụ maka mba ọ bụla.
Na Skrill: ịmepụta akaụntụ dịka ọ dị mfe na n'efu, nkwenye adịghị achọ ijikọ kaadị akwụmụgwọ, ma ụfọdụ nnata nke ịkwụ ụgwọ ọrụ na njirimara, usoro a na-ewe 24 awa ma ọ bụ obere. Ị nwere ike mepee akaụntụ ahụ na mba ọ bụla, ebe ọ na-anabata ụdị ego ego 40, ya mere, enweghị njedebe nke iji, dịka ebe ahụ.
Ị nwere ike tinye dị ka ọtụtụ akụ akụkọ na ego chọrọ, nke bụ bụghị ikpe na PayPal na-enye ohere na a onye na-azụ ahịa na akaụntụ, i nwere ike ịgbanwe nke itule nke na akaụntụ criptomonedas (bitcoin ego, bitcoin, ethereum kpochapụla, Ethereum, Litecoin na 0x) na otu Skrill interface.
Ụlọ ọrụ na ụgwọ
Na PayPal: The Ụlọrụ na-ezi elu, dị ka ihe atụ anyị na-gbakọọ na-esonụ: mgbe ndị ahịa na-achọ eziga 2.000 $ na-emetụta ego kwa Mbupu na-5,14% + 0,30 $, ie 108,3 $, ngụkọta onye ga-enweta 1.891,7 $. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ego dum, onye ahụ aghaghị izipu 2.114,48 iji nweta 2.000 $.
Dị ka ọrụ ichekwa na-elu, ndị na-arụ ga-ahọrọ na-ana zuru ego nke-arụ ọrụ, n'ihi na ọ bụrụ na ele mmadụ anya n'ihu ịkwụ ụgwọ na-mere, oge ọ bụla na-usoro na-agwụ agwụ a na ọnụego 5,14 0.30 + $ ga-ebubo. Nke a na ego na-dịgasị dị ka mba onye si (atụ, izipu ịkwụ ụgwọ Brazil na ego bụ $ 7.4 0,50% +).
Ọ bụrụ, ịchọrọ ịgbanwe mgbanwe ego n'oge nnakọta ma ọ bụ usoro mbupu, a na-ebo 3,5% ọzọ ebubo na ego.
PayPal na-arụ ọrụ n'okpuru echiche abụọ, (ọnụọgụ na nnukwu ego), yabụ a ga-echebara ọdịiche dị n'etiti ha abụọ mgbe ha kwenyere izipu na ịnata ego. Onyinye ego a bụ nke na-abịarute mgbe onye ọrụ ngo ahụ weghaara kọmịshọna (na nke a ego net bụ 2.114,48, nke mere na $ 2.000 zuru ezu ruru onye ọrụ ahụ), a natara nnukwu ego na-enweghị onye ọrụ ahụ kpuchiri ya Isslọ ọrụ PayPal pụtara na onye ọrụ ahụ natara ngụkọta nke $ 1.891,7.
Na Skrill: thelọ ọrụ maka ịnweta ego bụ efu, ya bụ, 0%, ya bụ, maka ihe atụ a, ọ bụrụ na onye ọrụ ngo na onye ọrụ kpebiri iji usoro ịkwụ ụgwọ a, onye ọrụ ga-enweta $ 2.000 zuru oke na-enweghị mbenata ego maka ọrụ. N'ihe banyere onye ọrụ nkwekọrịta ahụ, pasent ọrụ ahụ bụ 1,45%, ya bụ, onye ọrụ ngo ga-agbakwunye $ 29 karịa na ịkwụ ụgwọ ya, nke ga-abụ $ 85,48 na-erughị ọrụ PayPal.
Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego n'aka:
nkwụnye ego n'ụlọ akụ 0%
Bitcoin, neteller, Klarna, Paysafe ego, Trustlv: 1% ọrụ
Kaadị akwụmụgwọ American Express, Diners, kaadị SIM, VISA, kaadị akwụmụgwọ: 1% ọrụ
Ịkwụsị ọrụ ndị a bụ:
Ngwa ngwa: Euro 5,50
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji tọghata ego a nabatara na ego ọzọ, a na-ebo ọrụ 3,99% dịka ego ahụ si dị.
con Skrill Enwere ike ịnweta kaadị debit, nke enyere mgbe ọnụọgụ akaụntụ ahụ karịrị $ 3000, mgbe nke a mere ọ ga-abụ onye otu VIP (Bronze, Silver, Gold or Diamond). Ọnụ ego ya bụ euro 10 ma wepụta ya n'etiti awa 24 ruo 48, na-anata ya na ụbọchị azụmahịa 7 kachasị. Lọrụ maka mgbanwe ego bụ 2,49% maka ndị ọrụ oge niile, maka ndị ahịa VIP ọ bụ 1,75%.
Thelọ ọrụ maka iji kaadị a bụ efu, na ịpụ na ATM ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ọla, ọ bụ 1,90%, ọ bụrụ na ị bụ VIP Silver, Golden ma ọ bụ Diamond ahịa enweghị pasent nke ọrụ maka iwepụ, njedebe iwepụ Ọ bụ $ 900 ka $ 5000 dabere na ụdị akaụntụ. Ọ dị mma maka ndị na-azụ ihe n'ịntanetị.
Skrill, na-ewe a nzọụkwụ n'ihu, na nbata nke ịzụ ma na-ere criptomonedas, ụgwọ iche iche dabere ego i nwere na akaụntụ gị, n'ihi na ihe atụ, ọ bụrụ na akaụntụ nwere ego na dollar ma ọ bụ euro na chọrọ ịgbanwe ya criptomonedas, ndị Commission zuo ma ọ bụ ire bụ 1,50% n'ihi na ndị ọzọ ego ọrụ bụ 3% na-akwalite na ojiji nke ịgba chaa chaa, otú a usoro nke ịkwụ ụgwọ a na-anabata na fọrọ nke nta niile bookmakers na online casinos.
Na PayPal: The akaụntụ nche dị nnọọ elu, ma ọ bụrụ na e ọ bụla ndudue na ngo maka ugwo azụmahịa, na-eziga ego onye ọzọ ma ọ bụ na-ezighị ezi ntụziaka, ị nwere ike ịhụ ebe ego na-arahụ na arịrịọ reimbursement si ụlọ ọrụ. Ọnọdụ ọzọ bụ na, ọ bụrụ na PayPal na-enyo enyo na mmegharị nke akaụntụ ahụ na-akwado iwu ahụ iji mechie akaụntụ ahụ. N'ikpeazụ, ọ na-emepe usoro nyocha ma na-akwụ ụgwọ ego ahụ ruo mgbe e kpebiri ya.
Na Skrill: na-akwado iwu nke ịghara ịkekọrịta data ndị ahịa na onye ọ bụla na-ere ahịa, n'akụkụ ahụ ọ dị mma, ebe ọ bụ na mgbe ị na-akwụ ya naanị chọrọ email na paswọọdụ. Iji mee ka akaụntụ ahụ dị mma, gbasara ntinye site na PC ma ọ bụ ngwa mkpanaka, ịnwere ike ịgbalite ihe nyocha abụọ ahụ, nke na-ewepụta koodu site na Google Authenticator iji nwee ike ịnweta site na ebe ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla. Enwekwara usoro ịkwụghachi ego maka ndị ahịa ahụ niile na-eji mmemme nche nyocha abụọ.
Nkwado ndị ahịa na asụsụ 12 na-agafe ihe mgbochi, dị ka oge 24 nke awa azụmahịa gị na ụbọchị 7 n'izu.
Dị ka a pụrụ ịhụ, na onye ọ bụla nwere uru na ọghọm nke iji, onye ọrụ bụ ịkọwa ihe nzube nke na akaụntụ gị, ma si n'ebe ahụ na ọ na-ekpebi nke kacha mma dabara gị mkpa, na nke a Skrill Ọ bụ ezigbo ihe ọzọ maka ndị nọ na ụwa freelancer ma chọọ ịkwụ ụgwọ mgbe niile, si otú a na-ezere mbelata nke ego sitere na kọmitii ọ bụ ezie na ọ bụghị ewu ewu dịka uto ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya emechara. PayPal ga-anọgide na-abụ otu n'ime usoro ndị kachasị ewu ewu, ọ nwetara ntụkwasị obi nke ndị ahịa ya kemgbe ọtụtụ afọ, agbanyeghị, okwu nke ọrụ ga-adị oke oke maka ụfọdụ ndị ọrụ.
Previous Post«Previous Mmetụta nke mgbanwe site na ArcMap ka ArcGIS Pro